Dr. Saacid Faarax Garaad oo noqday R/wasaaraha cusub ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Oktoobar 6, 2012 8:29 b 0
Muqdisho Oct 6-Madaxweynaha Jamhuuriyada Federalka ah ee Somalia Md Xasan Sh Maxamuud ayaa goor dhoweyd xarunta Madaxtooyada Villa Somalia kaga dhawaaqay Ra’isal Wasaaraha Cusub ee Somalia.
Xilka Ra’isal Wasaarenimo ee dalka ayaa loo magacaabay Cabdi Faarax Shirdoon oo loo yaqaano Saacid Faarax Garaad, Waxaana magacaabistiisa lagu shaaciyey munaasibad ka dhacday xarunta Madaxtooyada Villa Somalia.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia Md Maxamed Cismaan Jawaari ayaa goob joog ka ahaa munaasibada lagu magacaabay Ra’isal Wasaaraha Cusub ee Somalia.
M/weyne Xasan Sh Maxamuud iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo saxaafada la hadlay ayaa Ra’isal Wasaaraha Cusub u rajeeyey in alle u fududeeyo hawlaha adag ee horyaala.
Ra’isal Wasaaraha Cusub oo hadal kooban jeediyey wuxuu sheegay in mudo kooban uu kusoo dhisi doono Xukuumad Cusub oo tayo leh dalkana ka samatabixisa maraxalada adag ee uu marayo.
Masuulka loo magacaabay Ra’isal Wasaaraha Dalka ayaa ah nin maalmihii danbe aad loo saadaalinayey in loo magacaabo Jagadan, Radiodaljir ayaa xalay heshay xogta ?dhabta ah ee magacaabista Ra’isal Wasaaraha Cusub.
Saacid Faarax Garaad Ra’isal Wasaaraha Cusub ee Somalia ayaa ah nin Ganacsade ah kuna Cusub siyaasada Somalia,Waxaana horyaala marxalado adag oo u baahan maarayntooda.
Puntland oo xidhay Idaacad Maxali ah oo ka shaqaysa Boosaaso